Tag: kutengesa kutevera
Chipiri, Kurume 28, 2017 Douglas Karr
Mubhadharo mutsva wakaita kubvunzurudzwa, asi hauna kuita sezvanga zvichitarisirwa. Nhengo dzechikwata hadzisi kurova makota nekuti ivo havasi kugashira kudzidziswa kwakakodzera. Vane tarenda vatengesi vari kusiya kambani nekuti ivo havanzwe kubatikana nebasa. Mutengesi wekutengesa anoita basa rakakomba mune ese ari pamusoro mamiriro. Mamaneja akasimba akakosha pakubudirira kwesangano, asi chete 12% yevashandi veUS vanobvuma zvakasimba maneja avo vanovabatsira kuisa pekutanga basa -